नेपाल एयरलाइन्सले पायो चीनमा उडानको अनुमति – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार १२:०८ English
नेपाल एयरलाइन्सले पायो चीनमा उडानको अनुमति
काठमाडौँ, १९ मंसिर । चीनले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई उडान अनुमति दिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले चीनको ग्वाङ्झाउमा उडानका लागि अनुमति मागेको थियो । एनएसीका अपरेशन विभाग प्रमुख वरिष्ठ पाइलट दीपु ज्वारचनका अनुसार चीनले नेपाल एयरलाइन्सको सेफ्टी अडिट नगरी उडान अनुमति दिएको हो ।
एनएसीले निकट भविष्यमा नै उडानको मिति तय गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्ससँग हाल ४ वटा जहाज छन् । ती जहाजबाट निगमले अहिले ८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । नेपाल अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटिसकेका कारण इयूको कालोसूची रहेपनि चीनले उडान अनुमति दिएको हो ।
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार १३:३५ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा छानो फेर्न एक अर्ब ३६ करोड !	३१ भाद्र २०७७, बुधबार १३:४१
प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा डा. खतिवडा नियुक्त	३० भाद्र २०७७, मंगलवार १९:१९
संविधान दिवसमा विशिष्ट व्यक्तित्व
३ आश्विन २०७७, शनिबार १७:३३